Susa ifayela noma ifolda - Izeluleko - I-T mov RELAY
Accueil » AMACEBISO »Susa ifayela noma ifolda - Izeluleko
Ufuna ukususa ifayela, kepha iWindows 10 ibuyisa umlayezo wephutha "wento engatholakalanga". Nansi ithiphu ezokuvumela ukuthi ususe kalula leli fayela okungenakwenzeka ukulisusa. Futhi lokho kusebenza namafolda "angenakufinyeleleka"!
Lolu uhlobo lwesimo olucasulayo. Ngaphandle kokuqonda ukuthi kungani, ngenxa yokuqanjwa ngamanga noma isiphazamisi, sizithola ngolunye usuku, eWindows Explorer, ngefayela elingaziwa, elikala ngokusemthethweni i-0 byte, nokuthi awukwazi ngisho nokukhohlisa: awukwazi ukuyihambisa, awukwazi ukuqamba kabusha, awunakususa ...
Kulesi skrini, ifayela le-3D Animated Short HD_ CGI kuthiwa "alitholakali" uma ufuna ukusisusa.
Noma nini lapho ufuna ukusebenzisa leli fayela, iWindows 10 ibonisa iwindi elinomyalezo wephutha "Ingxenye ayitholakali. Akusekho ku ... Hlola indawo yayo yamanje, bese uyazama futhi. ". Kepha esikhathini esiningi, akufanelekile ukuzama futhi: IWindows 10 iyenqaba ukuyicisha.
Inkinga efanayo ibuye ivele kwesinye isikhathi kumafayili.
Ngenhlanhla, kungenzeka ukuthi ususe le nto "ayitholakalanga" ngaphandle kokuthayipha umugqa womyalo futhi ngaphandle kokuhamba ngemodi ephephile yeWindows, sibonga ngethiphu encane, elula kakhulu ukuyisebenzisa. Siqukethe ukudlula ku-Windows Explorer 10 futhi kudlule kwisoftware yokunciphiswa nokufaka kungobo yomlando, njenge-7-Zip noma i-WinRAR.
Vula isoftware yokucindezela nokugcina kungobo yomlando
Kubha yokusesha yeWindows 10, sesha
noma enye software efanayo
Chofoza I-7-Zip ou WinRAR ukuvula isoftware okukhulunywa ngayo.
Uma ungenayo isoftware yokufakelwa ifayela efakwe kukhompyutha yakho, ungalanda eyodwa mahhala kusuka ekukhetheni kwethu (chofoza lapha)
Thola ifayela lingenakwenzeka ukulisusa
Lapho usuxhunyanisiwe nesoftware yokucindezela, zula kumafolda e-PC yakho ukuthola ifayela ofuna ukulisusa.
Chofoza igama lefayela.
Susa ifayela "alitholakali"
Lapho ifayili selikhethiwe, chofoza ukususa,
Qinisekisa ukususwa kwefayela ngokuchofoza kulo yebo.
Kumelwe ukhiphe udoti kwikhompyutha yakho, ne-voila: ekugcineni usuyiqedile le "element ayitholakali" ...
Hlela kabusha Izimpawu - Izeluleko